Maxaad kala Socotaa hadal heynta ugu badan ee Shacabka magaalada Muqdisho ? - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa si weyn looga hadal hayaa Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee lagu wado in maalinta berito ah ka dhacdo xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho.
Hadal heynta ugu badan ee shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta ah doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya iyo bandowga labada maalin ee lagu soo rogay Magaalada.
Dadka Shacabka ah ayaa maanta si weyn u faaqidaya siyaasada gaar ahaan arinaha la xariira doorashada, waxa ayna dadku hadal hayaan Musharaxiinta ku tartameysa xilka Madaxwewynaha Soomaaliya iyo shaqsiga ay la rabaan shacabku in Madaxweyne noqdo.
Magaalada Muqdisho ayaa maalinta berito marti galineysa doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana doorashadan ku tartami doona 23-Musharax oo isugu jira kuwa talada dalka horey usoo qabtay iyo siyaasiyiin cusub.